VLC Media Player bụ nnọọ ewu ewu ụbọchị ndị a. Ọ maara dị ka obere mkpanaaka, free, cross-ikpo okwu media ọkpụkpọ. Ya wezụga onwe ya, ọ na-eje ozi dị ka gụgharia media nkesa, nke a maara na-dere site onye ọzọ karịa VideoLan oru ngo.
Ọ bụ eziokwu na VLC Media Player bụ n'etiti ndị kasị ot media ngwaọrụ, e nwere ndị ka mgbe ị na-ezute isi ike ụfọdụ ma ọ bụ nsogbu iji ya. Ka ị bụ n'etiti ndị na-ezute ụfọdụ mbipụta ma ọ bụ nsogbu na iji VLC Media Player? Ọ bụrụ na ị bụ, mgbe ahụ, ị ​​nwere ike mkpa iji VLC nnyemaaka otú i nwere ike idozi ihe ọ bụla dị mkpa iji na-ofu.
E nwere ọtụtụ nke okwu na ike ga-webatara na VLC Media Player. Otu n'ime ndị a bụ dịghị ụda nke. Ọtụtụ ndị ugbua okosobode ụdị ihe a ma na-achọ ụzọ isi na-edozi ya.
Part 1: Ndi VLC Media Player Play MKV Videos?
Part 2: Olee otú Iji Idozi akara mmiri Video Na VLC Player?
Part 3: The Best VLC nnyemaaka
E nwere ọtụtụ nke faịlụ, gụnyere ụfọdụ videos, na VLC Media Player adịghị akwado. Ị nwere ịmata ihe ụdị nke faịlụ na gị VLC nwere ike igwu. Ọfọn, n'ihi na n'aka, ihe MKV video-abụghị otu n'ime ha n'ihi na VLC anaghị akwado MKV videos. Ya mere, ị nwere ike na-atụ anya na-were were egwu na-akpọ nke a na ụdị video na gị na mbụ media ọkpụkpọ. Nke a bụ n'etiti nnukwu obi nkoropụ nke VLC ọrụ. E nwere ọtụtụ nke MKV faịlụ na ọtụtụ ọrụ n'ezie chọrọ igwu. Otú o sina dị, ha na-clueless ka otú ha na-aga na-egwu ya mgbe ha mgbasa ozi ọkpụkpọ anaghị akwado ya.
Bụ eziokwu bụ na VLC nwere ike mfe na-agụ ma na-emeghe MKV videos. Otú ọ dị, nke ahụ bụ naanị ihe ọ nwere ike na-enye! Ha nwere ike na-emeghe ma na-agụ ya, ma anaghị ekwe nkwa na-egwu ya na ụda ma ọ bụ ihe ọ bụla dị mkpa. E nweghị nkwa na ị nwere ike igwu video were were. E nwere elu ekwe omume na ị ga-ezute nsogbu ụfọdụ. Ụfọdụ n'ime ihe ndị na pụrụ igbochi gị ụtọ ojiji nke gị mgbasa ozi ọkpụkpọ bụ Okwu ndị metụtara dịghị ụda, njehie na mpụga sobtaitel na ọtụtụ ndị ọzọ.
Ọ bụ ezie na nke a bụ ikpe, VLC ọrụ ndị ka na-ezi ihe ndabara ọma na-atụle eziokwu na e nwere ihe ndị ha nwere ike ime iji ka MKV videos egwu were were na n'iji ha media ọkpụkpọ. Otu nke kasị mma ụzọ na ị pụrụ ime iji dozie nsogbu a bụ ịdabere na VLC nnyemaaka. Na VLC nnyemaaka, na-egwu unsupported faịlụ na VLC mgbasa ozi ọkpụkpọ were were omume ugbu a.
Nkebi nke 2: Olee otú Iji Idozi akara mmiri Video Na VLC Player?
Ụfọdụ ndị na ozugbo freak mgbe ha na-ezute akara mmiri video. Ihe ndị a na ndị mmadụ amaghị bụ na anyị nwere ihe karịrị otu nhọrọ maka anyị aka idozi ụdị nsogbu. Ihe e depụtara n'okpuru ebe ndị anyị na nhọrọ na okwu nke gwara akara mmiri video na VLC Player.
1.) ịgbanwe Video Player
Otu n'ime ọtụtụ kwere omume mere gị video bụ akara mmiri bụ eziokwu na ọ nwere ike ghara ịbụ dakọtara ma ọ bụ kwesịrị ekwesị na gị ugbu a video ọkpụkpọ. Ọ bụrụ na nke a bụ ihe mere, mgbe ahụ, ị ​​nwere nhọrọ ịgbanwe gị video ọkpụkpọ. Tụlee ị na-ahọrọ otu n'ime ndị kasị ewu ewu na video Player na hụ ma ha na-dakọtara na gị faịlụ ma ọ bụ. Ụfọdụ video Player pụrụ ịbụ nnọọ mfe mgbe ndị nke ọzọ nwere ike ndị ọzọ atụmatụ nke nwere ike gị ojuju afọ video playback mkpa.
2.) Wụnye nkwụnye ins / Tinye-ons
Ọ bụrụ na ị na-achọghị ịgbanwe gị mgbasa ozi ọkpụkpọ, mgbe ahụ, ị ​​na-enwe ọzọ nhọrọ. Gị abụọ nhọrọ bụ iji kwalite ma tinye, ọ bụrụ na o kwere omume, ụfọdụ atụmatụ nke gị ugbu a media ọkpụkpọ. Dị nnọọ na-agagharị na ihe tinye-ons ma ọ bụ nkwụnye ins dị.
3.) Jiri All-na-otu Software
Ọ bụrụ na i chere na ị na-adịghị amasị mbụ na nke abụọ nhọrọ, mgbe ahụ, i nwere ike chọrọ iji na-atụ aro niile-na-otu software. Ọ ga-abụ ihe na-akwado a dịgasị iche iche nke mmepụta na ndenye faịlụ formats. Mee n'aka na ọ nwere atụmatụ na ị na-eche pụrụ ịbụ baara gị uru taa na n'ọdịnihu.
Nkebi nke 3: The Best VLC nnyemaaka
Kasị nkịtị nke chere ihu VLC ọrụ bụ nke ebe ha nwere ike ịnụ ọ dịghị ụda na ha MKV videos. Ọ bụrụ na ị na-ata ahụhụ site na nke a ụdị nsogbu, mgbe ahụ, nwee obi ụtọ na ọ bụghị gị bụ naanị otu onye na-ata ahụhụ site na nke a nakwa na e nwere VLC na-enyere aka na pụrụ inyere gị aka na nsogbu gị.
Ọ na-atụ aro ka i jiri ndị kasị mma VLC nnyemaaka iji nweta 100 percent afọ ojuju. Ọ bụrụ na ị na-eche ihe ndị kasị mma VLC nnyemaaka bụ, ọ bụ onye ọzọ karịa Wondershare Video Converter Ultimate. Ọ na-agụ ma na-akwado a ọnụ ọgụgụ nke mmepụta na ndenye faịlụ formats. Wezụga eziokwu na ị nwere ike idezi video faịlụ na a software, ị nwekwara ike ibudata YouTube videos na ike gị onwe gị DVD s. Bụ na a ukwuu? Ọ bụrụ na ị na-adịkwaghị chọrọ ka a nsogbu site niile kwere omume mbipụta na-eji VLC mgbasa ozi ọkpụkpọ, mgbe ahụ, ọ kasị mma ka gị download Wondershare Video Converter Ultimate ozugbo o kwere omume.